जनप्रतिनिधिको गाडीमोह, तेह्रथुममा स्थानीय निकायबाट ७ करोड स्वाहा ! Bizshala -
जनप्रतिनिधिको गाडीमोह, तेह्रथुममा स्थानीय निकायबाट ७ करोड स्वाहा !
तेह्रथुम । तेह्रथुमका छवटै स्थानीय तहले विभिन्न किसिमका सवारी साधन खरिदमा झण्डै रु सात करोड खर्च गरेका छन् । कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याउनका लागि आवश्यक भएको भन्दै स्थानीय तहको मोटो बजेट गाडी खरीदमा खर्च भएको छ । सबै स्थानीय तहको गरी कूल रु छ करोड ९० लाख ३९ हजार ७०० गाडी खरीदमा खर्च भएको छ ।